သမ္မတကြီးလင်ကွန်း ၀ိဥာဉ် နှင့် အိမ်ဖြူတော်မှ နာနာဘာဝများ - Thutazone
သမ္မတကြီးလင်ကွန်း ၀ိဥာဉ် နှင့် အိမ်ဖြူတော်မှ နာနာဘာဝများ
By ThutammPosted on December 27, 2017 December 27, 2017
Written By မောင်သာ(ရှေးဟောင်းသုတေသန)
၁၉၈၆ ခုနှစ် ၊ မတ်လ (၁၈)ရက်နေ့ကဖြစ်ပါ၏။ ကျွန်မနှင့်ကျွန်မ၏ ခင်ပွန်းတို့ သည် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသောကနေဒါနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဇနီး တို့အားတည်ခင်းဧည့်ခံသည့် နိုင်ငံတော်ညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားခြင်းခံရသဖြင့်အိမ်ဖြူတော်သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ဂုဏ်ပြု ညစာစားပွဲခန်းမဆောင်ကြီးကို ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ဖယောင်းမီး ထွန်းတိုင်များ၊ အနီရောင်နှင့်အဖြူရောင်ကျူးလစ်ပန်းများ ဖြင့် ပြည့်နေသည့် ရွှေဗန်းများ၊ ရွေပန်းအိုးများဖြင့် ခန်းလုံးပြည့် အလှဆင်ထားသည်။
ခန်းမအတွင်း ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် Brian Mulroney နှင့် ဇနီး Mila Mulroney ၊ ထိုစဉ်ကအမေရိကန်သမ္မတရော်နယ်ရီဂင်နှင့် ဇနီး နန်စီရီဂင် တို့အပါအ၀င် အခြားဂုဏ်သရေရှိပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အတူ စားပွဲတစ်ခုတည်းတွင် ကျွန်မ ထိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ညစာအတူတကွ သုံးဆောင်ကြရင်း အလွန် စကားပြောကောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် သမ္မတရော်နယ်ရီဂင် က အိမ်ဖြူတော် တွင် သူ ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးသောတစ္ဆေ၊ သရဲများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းများကိုနောက်ပိုင်းတွင် Ladies’ Home Journal တွင် ကျွန်မ ရေးသားခဲ့ပါသည်။
အမေရိကန်သမ္မတအဆက်ဆက်တို့ ၁၈၀၀ ပြည့်နှစ်မှစ၍ နေထိုင်၊ ရုံးစိုက်ရာအိမ်ဖြူတော်တွင်သရဲတစ္ဆေဇာတ်လမ်းများ၊ ယုံတမ်းစကားများ အများအပြားရှိခဲ့သော်လည်းယခုကျွန်မပြောမည့် ဇာတ်လမ်းသည်ကား သမ္မတရော်နယ်ရီဂင်ကိုယ်တိုင် သူ ၏ နှုတ်မှ ပြောခဲ့သောအကြောင်းအရာများသာဖြစ်ပေသည်။
အိမ်ဖြူတော်တွင် သမ္မတရော်နယ်ရီဂင် သည် Lucky ဟုအမည်ပေးထားသော ခွေးလေးတစ်ကောင်ကို မွေးမြူထားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်မွေးပွနားရှည် Cavalier မျိုး၊ခွေးလေး Rex ကို ထပ်မံ မွေးထားခဲ့ရာ Rex သည် သမ္မလင်ကွန်းအိပ်စက်ခဲ့သည့်အိပ်ခန်း ကိုကြည့်ကာမကြာခဏစူးစူးရှရှ ဟောင်တတ်သည်ကို သမ္မတကြီးကသတိထားခဲ့မိသည်။ ထို့သို့ ဟောင်အပြီးတွင်လည်းအပြင်ဘက် သို့ကြည့်ကာဟောင်နေတတ်ပြန်သည်။ခွေးဟောင်သံဆူဖြင့် Rex ကိုအပြင်သို့ မောင်းထုတ်တိုင်း မည်သို့မျှ မောင်း၍ မရဘဲ တံခါးဝ ဆီသို့ခြေပင်မချခဲ့ပါချေ။
တစ်ညနေတွင် ရော်နယ်ရီဂင်နှင့်ဇနီးတို့ သူတို့ အခန်းတွင် တီဗွီကြည့်နေကြစဉ် Rex သည် ပတတ် ရပ်ကာ မျက်နှာကြက်ဆီသို့ကြည့်လျက် နှာခေါင်းရှုံ့ပွပွလုပ်ပြီး အပေါ်မှ မမြင်ရသောတစ်စုံတစ်ခုကိုဟောင်နေခဲ့ပေသည်။Rex သည် အခန်း အတွင်းပတ်ချာလှည့် သွားနေကာ မျက်နှာကြက်ကို ကြည့်လျက် တောက်လျှောက်ဟောင်နေခဲ့သည်မှာ တကယ်ပင် အံ့သြဘွယ် ကောင်း လှပေသည်။
“ကျွန်တော်ကပထမတော့ဘာကြောင့်လဲစဉ်းစားကြည့်နေတာပေါ့၊နောက်တော့ လူတွေနားနဲ့မကြားနိုင်လောက်တဲ့ လျှပ်စစ် စီးကြောင်း အရမ်းမြင့်လာလို့များလားလို့ တွေးမိတာနဲ့ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ကိုကြည့်ခိုင်းလိုက်သေးတယ်၊ဒါပေမယ့် မဟုတ်ပါဘူး”
“ပြောရဦးမယ်ဗျ၊ကျွန်တော့်သမီးနဲ့ သားမက်က ကျွန်တော်တို့ဆီလာလည်ကြရင် လင်ကွန်းအခန်းမှာဘဲ အိပ်ကြတာကိုး၊ တစ်ရက်ကျတော့ ကျွန်တော့်သားမက်ကအိပ်ယာကနိုးအလာမှာ အိပ်ခန်းပြူတင်းနားမှာ လူတစ်ယောက်ရပ်နေတာ တွေ့လိုက်ရ တယ်တဲ့ ၊ အဲဒီလူရဲ့ ကိုယ်ကလည်းတိုးလျှိုးပေါက်မြင်နေရပြီး သူ့ဘက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီး ပျောက်သွားရောတဲ့ဗျ၊ သူ့မိန်းမကို သူက အဲဒိအကြောင်းပြန်ပြောပြတော့ ကျွန်တော့်သမီးက သူပြောတာမယုံတဲ့အပြင် သူ့ကိုတစ်လလောက် ပြောင်နေခဲ့တာလေ”
` “နောက်တစ်ခေါက်သူတို့ လာလည်တော့ ကျွန်တော့် အမီးအလှည့် ဖြစ်သွားပြီထင်ပါရဲ့၊ တစ်မနက် သူအိပ်ယာ က အထ မှာပြတင်းပေါက်နားမှာ ရပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်၊ ကျွန်တော့်သမီးက အဲဒီလူရဲ့ကိုယ်လုံးကိုဖောက်ပြီးအပြင်က အပင် တွေကိုမြင်နေရသတဲ့ဗျ၊ အဲဒိလူကကျွန်တော့်သမီးကိုလှည့်ကြည့်ပြီးပျောက်သွားတယ်”
ထိုညကညစာစားပွဲအပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်မ အိမ်ဖြူတော် တစ္ဆေများကိုသုတေသနလုပ်ကြည့်ခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဒါဇင်ဝက်ကျော်နှင့် သူတို့၏ဇနီးများသည် အိမ်ဖြူတော်မှခြောက်ခြားဖွယ်များနှင့် ကြုံခဲ့ရဖူးသည်ဟုဆိုကြပါသည်။အိမ်ဖြူတော် တစ္ဆေများအနက် လင်ကွန်းသည်အခြောက်လှန့်ဆုံးနာနာဘာဝပင်ဖြစ်သည်။ တစ္ဆေကြီးလင်ကွန်း က တစ်ခါက ဆာဝင်စတန် ချာချီကိုခြောက်လှန့်ခဲ့သေးသည်။ ရေချိုးခန်းမှထွက်လာကာ ဆေးပြင်းလိပ်ရှာနေသည့်ချာချီ့ကို လင်ကွန်းက ကိုယ်ထင်ပြခဲ့ရာ ချာချီက ထိုအခန်းတွင် အိပ်ရန် ငြင်းဆန်ခဲ့တော့သည်။
နယ်သာလန် ဘုရင်မ Queen Wilhelmina အိမ်ဖြူတ်ာသို့ ရောက်ရှိနေစဉ် သူတည်းခိုနေသည့်အခန်းကို တံခါး လာခေါက် သဖြင့် တံခါးထဖွင့်လိုက်ရာ မတ်တတ်ရပ်နေသောလင်ကွန်းကိုမြင်လိုက်ရသဖြင့် သတိလစ်မေ့မျောသွားခဲ့ဖူးသည်။ မကြာခဏတစ္ဆေခြောက်သည့် လင်ကွန်း၏ အိပ်ခန်းသည် သူသမ္မတ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်က လွတ်လပ်မှုနှင့် အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် အစိုးရအဖွဲ့ရုံးခန်းသာဖြစ်ပေသည်။သမ္မတအေဗရာဟင်လင်ကွန်းနှင့် သူ့ဇနီးတို့သည် တစ်ချိန်က အိမ်ဖြူတော်သို့နတ်ဆရာပင့်ကာသူတို့သားလေး၏ ၀ိဥာဉ်ကို အခေါ်ခိုင်းခဲ့ကြောင်းလူအများသိရှိပြီး လည်း ဖြစ်ပေသည်။ လင်းကွန်းတို့မောင်နှံက ကွယ်လွန်သွားသော သူတို့သားလေးအား တောင်တန်းများတွင် လမ်းလျှောက်နေ သည် ကိုတွေ့ကြရသဖြင့် နတ်ဆရာကို အိမ်ဖြူတော်သို့ ခေါ်ကာ သူတို့သားလေး၏ ၀ိဥာဉ်နှင့် စကားပြောရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်ဟု လည်း ပြောကြပါသည်။
အိမ်ဖြူတော်နာနာဘာဝအကြောင်းများကို ကျွန်မသာ မရေးဖြစ်ခဲ့လျှင် ယင်းတို့သည်လည်းတစ္ဆေဇာတ်လမ်းများဖြစ်လာ လိမ့်မည် မဟုတ်ပါချေ။ အိမ်ဖြူတော်၌ သမ္မတကြီးလင်ကွန်းအပြင် အခြား နာနာဘာဝတို့လည်းရှိနေကြသေးသည်။ အမေရိကန် သမ္မတတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည့် James Madison ၏ ဇနီး Dolley Madison ကိုလည်း အိမ်ဖြူတော် ၀င်းအတွင်း အပင် များ စိုက်ပျိုးသော နှင်းဆီဥယျာဉ်တွင် မကြာခဏဆိုသလို တွေ့ရတတ်သည်။
အိမ်ဖြူတော်၏ မြေတိုက်ခန်းတွင် နတ်မိစ္ဆာကြောင်တစ်ကောင်ရှိသည်ဟုဆိုကြသေးသည်။ ယင်းကြောင်ကိုအလွန်မြင်ရခဲ ပြီး သူ့ကိုမြင်ရပြီဆိုလျှင် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုးကြီးတစ်ခုခုကို မကြာမီရင်ဆိုင်ရတော့မည်ဟုကြိုတင်ပြောသည်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ အိမ်ဖြူတော်မှ လုံခြုံရေး ၀န်ထမ်းတစ်ဦးက ၁၉၂၉ ခုနှစ်ကစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်မပြိုလဲမီတစ်ပတ်ခန့်တွင် ထိုကြောင် ကိုမြင်ခဲ့ရ သည်။ထို့အတူပင် ၁၉၆၃ ခုနှစ်က သမ္မတကနေဒီလုပ်ကြံခြင်းမခံရမီ ရက်အနည်းငယ်တွင်အဆိုပါကြောင်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ ကြရသည် ဟု ဆိုပါသည်။
အိမ်ဖြူတော် နာနာဘာဝ တစ်ဦးဖြစ်သူ Abigail Adams ကိုလည်းအရှေ့ဘက်ဆောင်၊ အ၀တ်လျှော်ခန်းတွင် အ၀တ်များ လှမ်းနေသည်ကိုမကြာမကြာတွေ့ရတတ်သည်။သူ့ကိုနောက်ဆုံး ၂၀၀၂ ခုနှစ်ကတွေ့ခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုပါသည်။ Abigail Adams လာလျှင်အ၀တ်လျှော်ဆပ်ပြာနံ့များရလေ့ရှိသည်ဟု ကြုံဖူးကြသူများကပြောပြကြသည်။
. Calvin Coolidge ၏ဇနီးဖြစ်သူကလည်းအိမ်ဖြူတော်၏ ဘဲဥပုံရုံးခန်း၏ ပြူတင်းပေါက်အနီးဝယ် (ရော်နယ် ရီဂင်၏ သမီးဖြစ်သူ မြင်ခဲ့ရသည့် အနေအထားအတိုင်း) လက်နောက်ပစ်ကာအပြင်သို့ရပ်ကြည့်နေသောလင်ကွန်းကို တွေ့ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုပါသည်။ Franklin Roosevelt ၏ ကားအစောင့်ကလည်း တစ်ခါက လင်ကွန်းကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့် အော်ဟစ်ကာထွက်ပြေး သွားခဲ့ဖူးသည်။ သမ္မတဂျွန်ဆင် နှင့် ဂျရယ်ဖို့၏ သမီးဆူဆန်တို့ သည်လည်းလက်ကွန်းကိုမီးလင်းဖိုအနီးတွင် မြင်တွေ့ခဲ့ကြဖူးသည်။
လက်ရှိသမ္မတအိုဘားမားသည်လည်းလင်ကွန်းတစ္ဆေတံခါးလာခေါက်ခြင်းမျိုး နှင့်ကြုံတွေ့ဖူးခြင်းရှိ၊ မရှိသို့ မဟုတ်ပါက လည်းအိုဘားမား၏ ခွေးBeau သည်ရော်နယ်ရီဂင်၏ခွေး Rex ကဲ့သို့ထိပ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခဲ့ဖူးခြင်း ရှိမရှိကို ကျွန်မသိလို လှပါသည်။ အိမ်ဖြူတော်သည် ည အချိန်များဝယ်မဲမှောင်၍ကြောက်ဖွယ်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ကွယ်လွန်ခဲ့ကြသော အမေရိကန်သမ္မတများနှင့်ဗြိတိသျှစစ်သားဟောင်းသရဲတို့ခြောက်လှန့်ရာနေရာလည်းဖြစ်သည်။ အိမ်ဖြူတော်တွင်နှစ်ကာလရှည် ကြာစွာ လမ်းညွှန်အကြီးအကဲအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူ Gary Walters က
“အိမ်ဖြူတော်ဆိုတာကအတကယ်တော့အိမ်အိုကြီးတစ်ခုပါဘဲဗျာ၊ မီးမရှိတဲ့အချိန်မှာမှောင်မိုက်၊ ဆိပ်ငြိမ်နေပြီးဘာလေးဘဲ လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက် လူ့စိတ်ကိုဖမ်းစားစေတော့တာဘဲ” ဟုပြောခဲ့သည်။သူကဆက်၍
“သမ္မတဘုရ်ှတစ်ယောက်ကတော့ သရဲနဲ့တွေ့တယ်လို့ မကြားမိဘူးဗျ၊နောက်ပိုင်းသမ္မတတွေကတော့ သူတို့ ရှေ့က သေသွားကြတဲ့ သမ္မတတွေ အိမ်ဖြူတော်ထဲမှာ ဆက်ရှိနေကြတယ်လို့ ခံစားကြရတယ်တဲ့” ဟုရှင်းပြခဲ့သည်။
အိမ်ဖြူတော်တွင်သရဲအခြောက်ဆုံးနေရာမှာ သမ္မတများ၏ဧည့်ခန်းနေရာဖြစ်သည်ဟု Gary Walters က လျှို့ဝှက်သတင်း ပြန်ကြားရေးအရာရှိကို ကိုးကား ပြောခဲ့သည်။ အိမ်ဖြူတော်သည် ကာလရှည်ကြာကတည်းကပင်သရဲခြောက်သောနေရာအဖြစ်လူသိများခဲ့ပြီးအေဗရာဟင်လင်ကွန်းသည် အထင်ရှားဆုံးခြောက်လှန့်သူဖြစ်ပေသည်။ အေဗရာဟင်လင်ကွန်း၏ ဇနီးမေရီလင်ကွန်းသည်လည်း အင်ဒရူးဂျက်ဆင်၏ သရဲ ခြောက်သံ ကိုကြားခဲ့ရဖူးသည်။
တစ်ခါကသမ္မတWoodrow Wilson ၏ ဇနီးက နှင်းဆီဥယျာဉ်အတွင်းအပင်စိုက်ရန် တူးဆွနေစဉ် ယခင် သမ္မတ ကတော် ဟောင်း Dolley Madison ပေါ်လာပြီးသူ့ဥယျာဉ်ကိုမနှောက်ယှက်ရန် တားဆီးခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည်။ ၁၈၁၄ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်တို့ကအိမ်ဖြူတော်ကိုမီးတင်ရှို့စဉ်ကွယ်လွန်ခဲ့သော ဗြိတိသျှ စစ်သားတစ်ယောက်၏ ခြောက်လှန့်မှုကိုလည်းလူသိများကြသည်။ လူအများကထိုစစ်သားအားအိမ်ဖြူတော်တွင်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးတစ်ဝင်းဝင်း ကိုင်ဆောင် လျက်သွားလာနေသည်ကိုတွေ့ကြရသည်။ အိမ်ဖြူတော်ဝန်ထမ်း အတော်များများကထို ဗြိတိသျှ စစ်သား၏ ခြောက်လှန့် မှုကို ကြုံဖူးကြသည်။
တစ်ခါကအိမ်ဖြူတော် တံခါးပေါက်ဝ၌ Gary Walters နှင့် လုံခြုံရေးအရာရှိသုံးဦးတို့တာဝန်ကျနေကြစဉ် သူတို့ မတ်တတ် ရပ်နေကြသည့်ကြားတွင် အေးကနဲဖြစ်သွားခဲ့သည်။တစ်စုံတစ်ယောက်ကသူတို့ကြားမှ ဖြတ်သန်းသွားသကဲ့သို့ ခံစားလိုက်ကြ ရသည်။ထို့နောက်အိမ်ဖြူတော်တံခါးရွက်နှစ်ချပ်ကအလိုလိုပွင့်ထွက်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်ကြရသည်။ထိုတံခါးရွက်များသည် လူ တစ်ယောက်ယောက်က လက်ဖြင့် တွန်းမဖွင့်ဘဲမည်သို့မျှ မပွင့်နိုင်ကြသဖြင့်သူတို့အားလုံးတအံ့တသြဖြစ်ကြရကာမမေ့နိုင်သည့် အတွေ့အကြုံတစ်ခု ကိုရရှိခဲ့ရလေတော့သည်။
၁၊ ၁၈၄၀ ပြည့်နှစ်တွင် အိမ်ဖြူတော်တွင် ပထမဆုံး အသုဘအခမ်းအနားနှင့် ကြုံခဲ့ရသည်။ သမ္မတMartin Van Buren ၏ မြေးမလေး Rebecca Van Buren သည် ထိုနှစ် ဆောင်းဦးပေါက်တွင်မွေးဖွားပြီး လပိုင်းအတွင်းမှာပင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။
၂၊ ၁၈၄၁ ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် William Henry Harrison သည်အမေရိကန်သမ္မတအဖြစ်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့ ပြီး၂ လတိတိ (ရက်အားဖြင့် ၃၂ ရက်တိတိ အကြာ) ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့တွင် နမိုးနီးယားရောဂါဖြင့်အိမ်ဖြူတော်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ သူသည် သမ္မတ Benjamin Harrison ၏ အဘိုးဖြစ်သည်။ အိမ်ဖြူတော်တွင် သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကွယ်လွန်သူ သမ္မတနှစ်ဦးအနက်မှ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် ၆၈ နှစ် ရှိပြီဖြစ်သည်။
၃၊ Letitia Christian Tyler သည် အိမ်ဖြူတော်တွင် အနိစ္စရောက်ခဲ့သောသမ္မတကတော် သုံးဦးအနက်မှ ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ အသက် ၅၁ နှစ်အရွယ်၊ ၁၈၄၂ ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်တွင် လေသင်ဓုန်းဖြတ်ကာကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
၄၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ဒုတိယမြောက်သမ္မတZachary Taylor သည်လည်း၁၈၅၀ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့က ကွယ်လွန် ခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် ၆၅ နှစ်သာရှိသေးပြီးအစာအိမ်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၅၊ သမ္မတအေဗရာဟင်လင်ကွန်း၏ သား၊ အသက် (၁၁)နှစ် အရွယ်ရှိWilliam Wallace Lincoln သည် ၁၈၆၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့တွင် အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါကြောင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
၆၊ ၁၈၇၃ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင်မူသမ္မတUlysses S. Grant ၏ ယောက္ခမ ဖြစ်သူ အသက်၈၆ နှစ်ရှိစစ်မှုထမ်းဟောင်း Fredrick Dent ၏ ဈာပနအား အိမ်ဖြူတော် အပြာရောင်ခန်းမ(White House Blue Room) တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
၇၊ ၁၈၈၃ ခုနှစ် ၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက် နေ့တွင် အိမ်ဖြူတော်အတွင်း သမ္မတChester Arthur က သံတမန်များအားဧည့်ခံပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပခဲ့ရာ ထိုအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်နေသောအသက် ၇၉ ခုနှစ် အရွယ်ရှိ ဟာဝိုင်ယီ သံအမတ် Elisha Hunt Allen သည် ညစာသုံးဆောင်နေစဉ် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
၈၊ ၁၈၉၂ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင်လည်းသမ္မတBenjamin Harrison ၏ ဇနီးCaroline Scott Harrison (အသက်၆၀) သည် အဆုပ်ရောဂါဖြင့် အိမ်ဖြူတော်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
၉၊ Caroline Scott Harrison ၏ ဖခင် ဘုန်းတော်ကြီးRev. John Witherspoon Scott သည် သားမက်ဖြစ်သူ သမ္မတBenjamin Harrison ၏ သမ္မတသက်တမ်းတစ်လျောက် အိမ်ဖြူတော်တွင်နေထိုင်ခဲ့ရာအသက် ၉၂အရွယ်တွင်(သမီးဈာပနအပြီးတစ်လအကြာ) ၁၈၉၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်တွင် အိမ်ဖြူတော်၌ပင် ကွယ်လွန်ခဲ့လေသည်။
၁၀၊ သမ္မတHarry S. Truman ၏ ယောက္ခမ Margaret Elizabeth Madge Gates Wallace သည် လည်း အသက်၉၀ အရွယ်တွင် အိမ်ဖြူတော်၌ ၁၉၅၂ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်က ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
၁၁၊ ၁၉၁၄ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်မူ သမ္မတWoodrow Wilson ၏ ဇနီးအသက်၅၄ နှစ်ရှိသောEllen Louise Wilson
၁၂၊ ၁၉၅၀ ဒီဇင်ဘာ ၅ရက်နေ့ တွင် အိမ်ဖြူတော်ပြန်ကြားရေး အတွင်းရေးမှူး Charles G. Ross အသက် ၆၅နှစ်သည် ရုံးခန်းအတွင်းရှိ သူ၏ စားပွဲတွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
၁၃၊ ၁၉၅၂ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၅ရက်နေ့တွင် သမ္မတကတော် Bess Truman ၏ မိခင် အသက် ၉၀အရွယ် Margaret Wallace ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ သမ္မတစံတော်အိမ်ဖြစ်သောအိမ်ဖြူတော်သည်နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာနေရာ ဖြစ်သကဲ့သို့ သမိုင်းဝင် သရဲခြောက်သောစံအိမ်ကြီးလည်းဖြစ်သည်။ ၁၈၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် အိမ်ဖြူတော်ကိုဆောက်လုပ် ပြီးစီးသည့် အချိန်မှစ၍အနည်းဆုံးလူဆယ်ဦးကျော်မျှ အိမ်ဖြူတော်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းတို့ထဲတွင် သမ္မတနှစ်ဦး၊ သမ္မတကတော် သုံးဦး နှင့် သမ္မတတို့၏ မိသားစုဝင်များပါဝင်ခဲ့ပေသည်။ကွယ်လွန်ကြသူများအနက်မှ အချို့သည် ယနေ့တိုင် ခြောက်လှန့်လျက် ရှိနေကြရာ အိမ်ဖြူတော်ဆောက်လုပ်ရန် ၁၇၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် မြေသိမ်းခံရသူ အိမ်ဖြူတော်မြေနေရာ၏ မူလမြေပိုင်ရှင် DavidBurnes လည်းတစ်ယောက်အပါ အ၀င်ဖြစ်ပါတော့သည်။
သမ်မတကွီးလငျကှနျး ဝိဥာဉျ နှငျ့ အိမျဖွူတျောမှ နာနာဘာဝမြား (unicode)
၁၉၈၆ ခုနှဈ ၊ မတျလ (၁၈)ရကျနကေ့ဖွဈပါ၏။ ကြှနျမနှငျ့ကြှနျမ၏ ခငျပှနျးတို့ သညျ အမရေိကနျနိုငျငံသို့ခဈြကွညျရေးခရီးရောကျရှိနသေောကနဒေါနိုငျငံဝနျကွီးခြုပျနှငျ့ဇနီး တို့အားတညျခငျးဧညျ့ခံသညျ့ နိုငျငံတျောညစာစားပှဲသို့ တကျရောကျရနျဖိတျကွားခွငျးခံရသဖွငျ့အိမျဖွူတျောသို့ရောကျရှိခဲ့ကွသညျ။ ဂုဏျပွု ညစာစားပှဲခနျးမဆောငျကွီးကို ရှဖွေငျ့ပွုလုပျထားသညျ့ ဖယောငျးမီး ထှနျးတိုငျမြား၊ အနီရောငျနှငျ့အဖွူရောငျကြူးလဈပနျးမြား ဖွငျ့ ပွညျ့နသေညျ့ ရှဗေနျးမြား၊ ရှပေနျးအိုးမြားဖွငျ့ ခနျးလုံးပွညျ့ အလှဆငျထားသညျ။
ခနျးမအတှငျး ကနဒေါဝနျကွီးခြုပျ Brian Mulroney နှငျ့ ဇနီး Mila Mulroney ၊ ထိုစဉျကအမရေိကနျသမ်မတရျောနယျရီဂငျနှငျ့ ဇနီး နနျစီရီဂငျ တို့အပါအဝငျ အခွားဂုဏျသရရှေိပုဂ်ဂိုလျမြား နှငျ့ အတူ စားပှဲတဈခုတညျးတှငျ ကြှနျမ ထိုငျခှငျ့ရရှိခဲ့ပါသညျ။ ညစာအတူတကှ သုံးဆောငျကွရငျး အလှနျ စကားပွောကောငျးသူတဈဦးဖွဈသညျ့ သမ်မတရျောနယျရီဂငျ က အိမျဖွူတျော တှငျ သူ ကိုယျတိုငျကွုံတှခေဲ့ရဖူးသောတစ်ဆေ၊ သရဲမြားအကွောငျးကိုပွောပွခဲ့သညျ။ ထိုအကွောငျးမြားကိုနောကျပိုငျးတှငျ Ladies’ Home Journal တှငျ ကြှနျမ ရေးသားခဲ့ပါသညျ။
အမရေိကနျသမ်မတအဆကျဆကျတို့ ၁၈၀၀ ပွညျ့နှဈမှစ၍ နထေိုငျ၊ ရုံးစိုကျရာအိမျဖွူတျောတှငျသရဲတစ္ဆေဇာတျလမျးမြား၊ ယုံတမျးစကားမြား အမြားအပွားရှိခဲ့သျောလညျးယခုကြှနျမပွောမညျ့ ဇာတျလမျးသညျကား သမ်မတရျောနယျရီဂငျကိုယျတိုငျ သူ ၏ နှုတျမှ ပွောခဲ့သောအကွောငျးအရာမြားသာဖွဈပသေညျ။
အိမျဖွူတျောတှငျ သမ်မတရျောနယျရီဂငျ သညျ Lucky ဟုအမညျပေးထားသော ခှေးလေးတဈကောငျကို မှေးမွူထားခဲ့သညျ။ နောကျပိုငျးတှငျမှေးပှနားရှညျ Cavalier မြိုး၊ခှေးလေး Rex ကို ထပျမံ မှေးထားခဲ့ရာ Rex သညျ သမ်မလငျကှနျးအိပျစကျခဲ့သညျ့အိပျခနျး ကိုကွညျ့ကာမကွာခဏစူးစူးရှရှ ဟောငျတတျသညျကို သမ်မတကွီးကသတိထားခဲ့မိသညျ။ ထို့သို့ ဟောငျအပွီးတှငျလညျးအပွငျဘကျ သို့ကွညျ့ကာဟောငျနတေတျပွနျသညျ။ခှေးဟောငျသံဆူဖွငျ့ Rex ကိုအပွငျသို့ မောငျးထုတျတိုငျး မညျသို့မြှ မောငျး၍ မရဘဲ တံခါးဝ ဆီသို့ခွပေငျမခခြဲ့ပါခြေ။
တဈညနတှေငျ ရျောနယျရီဂငျနှငျ့ဇနီးတို့ သူတို့ အခနျးတှငျ တီဗှီကွညျ့နကွေစဉျ Rex သညျ ပတတျ ရပျကာ မကျြနှာကွကျဆီသို့ကွညျ့လကျြ နှာခေါငျးရှုံ့ပှပှလုပျပွီး အပျေါမှ မမွငျရသောတဈစုံတဈခုကိုဟောငျနခေဲ့ပသေညျ။Rex သညျ အခနျး အတှငျးပတျခြာလှညျ့ သှားနကော မကျြနှာကွကျကို ကွညျ့လကျြ တောကျလြှောကျဟောငျနခေဲ့သညျမှာ တကယျပငျ အံ့ဩဘှယျ ကောငျး လှပသေညျ။
“ကြှနျတျောကပထမတော့ဘာကွောငျ့လဲစဉျးစားကွညျ့နတောပေါ့၊နောကျတော့ လူတှနေားနဲ့မကွားနိုငျလောကျတဲ့ လြှပျစဈ စီးကွောငျး အရမျးမွငျ့လာလို့မြားလားလို့ တှေးမိတာနဲ့ ဝနျထမျးတဈယောကျကိုကွညျ့ခိုငျးလိုကျသေးတယျ၊ဒါပမေယျ့ မဟုတျပါဘူး”
“ပွောရဦးမယျဗြ၊ကြှနျတေျာ့သမီးနဲ့ သားမကျက ကြှနျတျောတို့ဆီလာလညျကွရငျ လငျကှနျးအခနျးမှာဘဲ အိပျကွတာကိုး၊ တဈရကျကတြော့ ကြှနျတေျာ့သားမကျကအိပျယာကနိုးအလာမှာ အိပျခနျးပွူတငျးနားမှာ လူတဈယောကျရပျနတော တှလေို့ကျရ တယျတဲ့ ၊ အဲဒီလူရဲ့ ကိုယျကလညျးတိုးလြှိုးပေါကျမွငျနရေပွီး သူ့ဘကျလှညျ့ကွညျ့လိုကျပွီး ပြောကျသှားရောတဲ့ဗြ၊ သူ့မိနျးမကို သူက အဲဒိအကွောငျးပွနျပွောပွတော့ ကြှနျတေျာ့သမီးက သူပွောတာမယုံတဲ့အပွငျ သူ့ကိုတဈလလောကျ ပွောငျနခေဲ့တာလေ”
` “နောကျတဈခေါကျသူတို့ လာလညျတော့ ကြှနျတေျာ့ အမီးအလှညျ့ ဖွဈသှားပွီထငျပါရဲ့၊ တဈမနကျ သူအိပျယာ က အထ မှာပွတငျးပေါကျနားမှာ ရပျနတေဲ့လူတဈယောကျကိုတှလေို့ကျရတယျ၊ ကြှနျတေျာ့သမီးက အဲဒီလူရဲ့ကိုယျလုံးကိုဖောကျပွီးအပွငျက အပငျ တှကေိုမွငျနရေသတဲ့ဗြ၊ အဲဒိလူကကြှနျတေျာ့သမီးကိုလှညျ့ကွညျ့ပွီးပြောကျသှားတယျ”
ထိုညကညစာစားပှဲအပွီး နောကျပိုငျးတှငျ ကြှနျမ အိမျဖွူတျော တစ္ဆေမြားကိုသုတသေနလုပျကွညျ့ခဲ့ပါသညျ။ အမရေိကနျသမ်မတဟောငျး ဒါဇငျဝကျကြျောနှငျ့ သူတို့၏ဇနီးမြားသညျ အိမျဖွူတျောမှခွောကျခွားဖှယျမြားနှငျ့ ကွုံခဲ့ရဖူးသညျဟုဆိုကွပါသညျ။အိမျဖွူတျော တစ်ဆမြေားအနကျ လငျကှနျးသညျအခွောကျလှနျ့ဆုံးနာနာဘာဝပငျဖွဈသညျ။ တစ်ဆကွေီးလငျကှနျး က တဈခါက ဆာဝငျစတနျ ခြာခြီကိုခွောကျလှနျ့ခဲ့သေးသညျ။ ရခြေိုးခနျးမှထှကျလာကာ ဆေးပွငျးလိပျရှာနသေညျ့ခြာခြီ့ကို လငျကှနျးက ကိုယျထငျပွခဲ့ရာ ခြာခြီက ထိုအခနျးတှငျ အိပျရနျ ငွငျးဆနျခဲ့တော့သညျ။
နယျသာလနျ ဘုရငျမ Queen Wilhelmina အိမျဖွူတျာသို့ ရောကျရှိနစေဉျ သူတညျးခိုနသေညျ့အခနျးကို တံခါး လာခေါကျ သဖွငျ့ တံခါးထဖှငျ့လိုကျရာ မတျတတျရပျနသေောလငျကှနျးကိုမွငျလိုကျရသဖွငျ့ သတိလဈမမြေ့ောသှားခဲ့ဖူးသညျ။ မကွာခဏတစ္ဆေခွောကျသညျ့ လငျကှနျး၏ အိပျခနျးသညျ သူသမ်မတ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့စဉျက လှတျလပျမှုနှငျ့ အခှငျ့အရေး ကွညောစာတမျးကိုလကျမှတျရေးထိုးခဲ့သညျ့ အစိုးရအဖှဲ့ရုံးခနျးသာဖွဈပသေညျ။သမ်မတအဗေရာဟငျလငျကှနျးနှငျ့ သူ့ဇနီးတို့သညျ တဈခြိနျက အိမျဖွူတျောသို့နတျဆရာပငျ့ကာသူတို့သားလေး၏ ဝိဥာဉျကို အချေါခိုငျးခဲ့ကွောငျးလူအမြားသိရှိပွီး လညျး ဖွဈပသေညျ။ လငျးကှနျးတို့မောငျနှံက ကှယျလှနျသှားသော သူတို့သားလေးအား တောငျတနျးမြားတှငျ လမျးလြှောကျနေ သညျ ကိုတှကွေ့ရသဖွငျ့ နတျဆရာကို အိမျဖွူတျောသို့ ချေါကာ သူတို့သားလေး၏ ဝိဥာဉျနှငျ့ စကားပွောရနျ ကွိုးပမျးခဲ့ကွသညျဟု လညျး ပွောကွပါသညျ။
အိမျဖွူတျောနာနာဘာဝအကွောငျးမြားကို ကြှနျမသာ မရေးဖွဈခဲ့လြှငျ ယငျးတို့သညျလညျးတစ္ဆေဇာတျလမျးမြားဖွဈလာ လိမျ့မညျ မဟုတျပါခြေ။ အိမျဖွူတျော၌ သမ်မတကွီးလငျကှနျးအပွငျ အခွား နာနာဘာဝတို့လညျးရှိနကွေသေးသညျ။ အမရေိကနျ သမ်မတတဈဦးဖွဈခဲ့သညျ့ James Madison ၏ ဇနီး Dolley Madison ကိုလညျး အိမျဖွူတျော ဝငျးအတှငျး အပငျ မြား စိုကျပြိုးသော နှငျးဆီဥယြာဉျတှငျ မကွာခဏဆိုသလို တှရေ့တတျသညျ။
အိမျဖွူတျော၏ မွတေိုကျခနျးတှငျ နတျမိစ်ဆာကွောငျတဈကောငျရှိသညျဟုဆိုကွသေးသညျ။ ယငျးကွောငျကိုအလှနျမွငျရခဲ ပွီး သူ့ကိုမွငျရပွီဆိုလြှငျ ဘေးအန်တရာယျဆိုးကွီးတဈခုခုကို မကွာမီရငျဆိုငျရတော့မညျဟုကွိုတငျပွောသညျနှငျ့အတူတူပငျဖွဈသညျ။ အိမျဖွူတျောမှ လုံခွုံရေး ဝနျထမျးတဈဦးက ၁၉၂၉ ခုနှဈကစတော့ရှယျယာဈေးကှကျမပွိုလဲမီတဈပတျခနျ့တှငျ ထိုကွောငျ ကိုမွငျခဲ့ရ သညျ။ထို့အတူပငျ ၁၉၆၃ ခုနှဈက သမ်မတကနဒေီလုပျကွံခွငျးမခံရမီ ရကျအနညျးငယျတှငျအဆိုပါကွောငျကို မွငျတှခေဲ့ ကွရသညျ ဟု ဆိုပါသညျ။
အိမျဖွူတျော နာနာဘာဝ တဈဦးဖွဈသူ Abigail Adams ကိုလညျးအရှဘေ့ကျဆောငျ၊ အဝတျလြှျောခနျးတှငျ အဝတျမြား လှမျးနသေညျကိုမကွာမကွာတှရေ့တတျသညျ။သူ့ကိုနောကျဆုံး ၂၀၀၂ ခုနှဈကတှခေဲ့ကွသညျဟု ဆိုပါသညျ။ Abigail Adams လာလြှင်အဝတျလြှျောဆပျပွာနံ့မြားရလရှေိ့သညျဟု ကွုံဖူးကွသူမြားကပွောပွကွသညျ။
. Calvin Coolidge ၏ဇနီးဖွဈသူကလညျးအိမျဖွူတျော၏ ဘဲဥပုံရုံးခနျး၏ ပွူတငျးပေါကျအနီးဝယျ (ရျောနယျ ရီဂငျ၏ သမီးဖွဈသူ မွငျခဲ့ရသညျ့ အနအေထားအတိုငျး) လကျနောကျပဈကာအပွငျသို့ရပျကွညျ့နသေောလငျကှနျးကို တှခေဲ့ရသညျဟု ဆိုပါသညျ။ Franklin Roosevelt ၏ ကားအစောငျ့ကလညျး တဈခါက လငျကှနျးကိုတှလေို့ကျရသဖွငျ့ အျောဟဈကာထှကျပွေး သှားခဲ့ဖူးသညျ။ သမ်မတဂြှနျဆငျ နှငျ့ ဂရြယျဖို့၏ သမီးဆူဆနျတို့ သညျလညျးလကျကှနျးကိုမီးလငျးဖိုအနီးတှငျ မွငျတှခေဲ့ကွဖူးသညျ။
လကျရှိသမ်မတအိုဘားမားသညျလညျးလငျကှနျးတစ်ဆတေံခါးလာခေါကျခွငျးမြိုး နှငျ့ကွုံတှဖေူ့းခွငျးရှိ၊ မရှိသို့ မဟုတျပါက လညျးအိုဘားမား၏ ခှေးBeau သညျရျောနယျရီဂငျ၏ခှေး Rex ကဲ့သို့ထိပျလနျ့ကွောကျရှံ့ခဲ့ဖူးခွငျး ရှိမရှိကို ကြှနျမသိလို လှပါသညျ။ အိမျဖွူတျောသညျ ည အခြိနျမြားဝယျမဲမှောငျ၍ကွောကျဖှယျကောငျးသောနရောတဈခုဖွဈသညျ။ကှယျလှနျခဲ့ကွသော အမရေိကနျသမ်မတမြားနှငျ့ဗွိတိသြှစဈသားဟောငျးသရဲတို့ခွောကျလှနျ့ရာနရောလညျးဖွဈသညျ။ အိမျဖွူတျောတှငျနှဈကာလရှညျ ကွာစှာ လမျးညှနျအကွီးအကဲအဖွဈတာဝနျယူခဲ့သူ Gary Walters က
“အိမျဖွူတျောဆိုတာကအတကယျတော့အိမျအိုကွီးတဈခုပါဘဲဗြာ၊ မီးမရှိတဲ့အခြိနျမှာမှောငျမိုကျ၊ ဆိပျငွိမျနပွေီးဘာလေးဘဲ လှုပျလိုကျလှုပျလိုကျ လူ့စိတျကိုဖမျးစားစတေော့တာဘဲ” ဟုပွောခဲ့သညျ။သူကဆကျ၍
“သမ်မတဘုရျှတဈယောကျကတော့ သရဲနဲ့တှတေ့ယျလို့ မကွားမိဘူးဗြ၊နောကျပိုငျးသမ်မတတှကေတော့ သူတို့ ရှကေ့ သသှေားကွတဲ့ သမ်မတတှေ အိမျဖွူတျောထဲမှာ ဆကျရှိနကွေတယျလို့ ခံစားကွရတယျတဲ့” ဟုရှငျးပွခဲ့သညျ။
အိမျဖွူတျောတှငျသရဲအခွောကျဆုံးနရောမှာ သမ်မတမြား၏ဧညျ့ခနျးနရောဖွဈသညျဟု Gary Walters က လြှို့ဝှကျသတငျး ပွနျကွားရေးအရာရှိကို ကိုးကား ပွောခဲ့သညျ။ အိမျဖွူတျောသညျ ကာလရှညျကွာကတညျးကပငျသရဲခွောကျသောနရောအဖွဈလူသိမြားခဲ့ပွီးအဗေရာဟငျလငျကှနျးသညျ အထငျရှားဆုံးခွောကျလှနျ့သူဖွဈပသေညျ။ အဗေရာဟငျလငျကှနျး၏ ဇနီးမရေီလငျကှနျးသညျလညျး အငျဒရူးဂကျြဆငျ၏ သရဲ ခွောကျသံ ကိုကွားခဲ့ရဖူးသညျ။
တဈခါကသမ်မတWoodrow Wilson ၏ ဇနီးက နှငျးဆီဥယြာဉျအတှငျးအပငျစိုကျရနျ တူးဆှနစေဉျ ယခငျ သမ်မတ ကတျော ဟောငျး Dolley Madison ပျေါလာပွီးသူ့ဥယြာဉျကိုမနှောကျယှကျရနျ တားဆီးခဲ့သညျဟုဆိုပါသညျ။ ၁၈၁၄ ခုနှဈတှငျ အင်ျဂလိပျတို့ကအိမျဖွူတျောကိုမီးတငျရှို့စဉျကှယျလှနျခဲ့သော ဗွိတိသြှ စဈသားတဈယောကျ၏ ခွောကျလှနျ့မှုကိုလညျးလူသိမြားကွသညျ။ လူအမြားကထိုစဈသားအားအိမျဖွူတျောတှငျလကျနှိပျဓာတျမီးတဈဝငျးဝငျး ကိုငျဆောငျ လကျြသှားလာနသေညျကိုတှကွေ့ရသညျ။ အိမျဖွူတျောဝနျထမျး အတျောမြားမြားကထို ဗွိတိသြှ စဈသား၏ ခွောကျလှနျ့ မှုကို ကွုံဖူးကွသညျ။
တဈခါကအိမျဖွူတျော တံခါးပေါကျဝ၌ Gary Walters နှငျ့ လုံခွုံရေးအရာရှိသုံးဦးတို့တာဝနျကနြကွေစဉျ သူတို့ မတျတတျ ရပျနကွေသညျ့ကွားတှငျ အေးကနဲဖွဈသှားခဲ့သညျ။တဈစုံတဈယောကျကသူတို့ကွားမှ ဖွတျသနျးသှားသကဲ့သို့ ခံစားလိုကျကွ ရသညျ။ထို့နောကျအိမျဖွူတျောတံခါးရှကျနှဈခပျြကအလိုလိုပှငျ့ထှကျသှားသညျကိုမွငျလိုကျကွရသညျ။ထိုတံခါးရှကျမြားသညျ လူ တဈယောကျယောကျက လကျဖွငျ့ တှနျးမဖှငျ့ဘဲမညျသို့မြှ မပှငျ့နိုငျကွသဖွငျ့သူတို့အားလုံးတအံ့တဩဖွဈကွရကာမမနေို့ငျသညျ့ အတှအေ့ကွုံတဈခု ကိုရရှိခဲ့ရလတေော့သညျ။
၁၊ ၁၈၄၀ ပွညျ့နှဈတှငျ အိမျဖွူတျောတှငျ ပထမဆုံး အသုဘအခမျးအနားနှငျ့ ကွုံခဲ့ရသညျ။ သမ်မတMartin Van Buren ၏ မွေးမလေး Rebecca Van Buren သညျ ထိုနှဈ ဆောငျးဦးပေါကျတှငျမှေးဖှားပွီး လပိုငျးအတှငျးမှာပငျကှယျလှနျသှားခဲ့သညျ။
၂၊ ၁၈၄၁ ခုနှဈ မတျလ ၄ ရကျနတှေ့ငျ William Henry Harrison သညျအမရေိကနျသမ်မတအဖွဈကမျြးသစ်စာကြိနျဆိုခဲ့ ပွီး၂ လတိတိ (ရကျအားဖွငျ့ ၃၂ ရကျတိတိ အကွာ) ဧပွီလ ၄ ရကျနတှေ့ငျ နမိုးနီးယားရောဂါဖွငျ့အိမျဖွူတျောတှငျကှယျလှနျခဲ့သညျ။ သူသညျ သမ်မတ Benjamin Harrison ၏ အဘိုးဖွဈသညျ။ အိမျဖွူတျောတှငျ သမ်မတတာဝနျထမျးဆောငျစဉျကှယျလှနျသူ သမ်မတနှဈဦးအနကျမှ တဈဦးဖွဈပွီး ကှယျလှနျခြိနျတှငျ အသကျ ၆၈ နှဈ ရှိပွီဖွဈသညျ။
၃၊ Letitia Christian Tyler သညျ အိမျဖွူတျောတှငျ အနိစ်စရောကျခဲ့သောသမ်မတကတျော သုံးဦးအနကျမှ ပထမဆုံးဖွဈသညျ။ အသကျ ၅၁ နှဈအရှယျ၊ ၁၈၄၂ ခုနှဈ၊စကျတငျဘာလ ၁၀ ရကျတှငျ လသေငျဓုနျးဖွတျကာကှယျလှနျခဲ့သညျ။
၄၊ အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏ ဒုတိယမွောကျသမ်မတZachary Taylor သညျလညျး၁၈၅၀ပွညျ့နှဈ ဇူလိုငျလ ၉ ရကျနကေ့ ကှယျလှနျ ခဲ့သညျ။ ကှယျလှနျခြိနျတှငျ အသကျ ၆၅ နှဈသာရှိသေးပွီးအစာအိမျရောဂါကွောငျ့ သဆေုံးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
၅၊ သမ်မတအဗေရာဟငျလငျကှနျး၏ သား၊ အသကျ (၁၁)နှဈ အရှယျရှိWilliam Wallace Lincoln သညျ ၁၈၆၂ ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီ ၂၀ ရကျနတှေ့ငျ အူရောငျငနျးဖြားရောဂါကွောငျ့ ကှယျလှနျခဲ့သညျ။
၆၊ ၁၈၇၃ ခုနှဈ ၊ ဒီဇငျဘာလ ၁၅ ရကျနတှေ့ငျမူသမ်မတUlysses S. Grant ၏ ယောက်ခမ ဖွဈသူ အသကျ၈၆ နှဈရှိစဈမှုထမျးဟောငျး Fredrick Dent ၏ ဈာပနအား အိမျဖွူတျော အပွာရောငျခနျးမ(White House Blue Room) တှငျ ကငျြးပခဲ့သညျ။
၇၊ ၁၈၈၃ ခုနှဈ ၊ ဇနျနဝါရီလ ၁ ရကျ နတှေ့ငျ အိမျဖွူတျောအတှငျး သမ်မတChester Arthur က သံတမနျမြားအားဧညျ့ခံပှဲတဈရပျ ကငျြးပခဲ့ရာ ထိုအခမျးအနားသို့ တကျရောကျနသေောအသကျ ၇၉ ခုနှဈ အရှယျရှိ ဟာဝိုငျယီ သံအမတျ Elisha Hunt Allen သညျ ညစာသုံးဆောငျနစေဉျ ကှယျလှနျခဲ့သညျ။
၈၊ ၁၈၉၂ ခုနှဈ ၊ အောကျတိုဘာလ ၂၅ ရကျနတှေ့ငျလညျးသမ်မတBenjamin Harrison ၏ ဇနီးCaroline Scott Harrison (အသကျ၆၀) သညျ အဆုပျရောဂါဖွငျ့ အိမျဖွူတျောတှငျကှယျလှနျခဲ့သညျ။
၉၊ Caroline Scott Harrison ၏ ဖခငျ ဘုနျးတျောကွီးRev. John Witherspoon Scott သညျ သားမကျဖွဈသူ သမ်မတBenjamin Harrison ၏ သမ်မတသကျတမျးတဈလြောကျ အိမျဖွူတျောတှငျနထေိုငျခဲ့ရာအသကျ ၉၂အရှယျတှငျ(သမီးဈာပနအပွီးတဈလအကွာ) ၁၈၉၂ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာလ ၂၉ ရကျတှငျ အိမျဖွူတျော၌ပငျ ကှယျလှနျခဲ့လသေညျ။
၁၀၊ သမ်မတHarry S. Truman ၏ ယောက်ခမ Margaret Elizabeth Madge Gates Wallace သညျ လညျး အသကျ၉၀ အရှယျတှငျ အိမျဖွူတျော၌ ၁၉၅၂ ခုနှဈ ၊ ဒီဇငျဘာလ ၅ ရကျက ကှယျလှနျခဲ့သညျ။
၁၁၊ ၁၉၁၄ ခုနှဈ ဩဂုတျလ ၆ ရကျနတှေ့ငျမူ သမ်မတWoodrow Wilson ၏ ဇနီးအသကျ၅၄ နှဈရှိသောEllen Louise Wilson
၁၂၊ ၁၉၅၀ ဒီဇငျဘာ ၅ရကျနေ့ တှငျ အိမျဖွူတျောပွနျကွားရေး အတှငျးရေးမှူး Charles G. Ross အသကျ ၆၅နှဈသညျ ရုံးခနျးအတှငျးရှိ သူ၏ စားပှဲတှငျကှယျလှနျခဲ့သညျ။
၁၃၊ ၁၉၅၂ခုနှဈ ဒီဇငျဘာ ၅ရကျနတှေ့ငျ သမ်မတကတျော Bess Truman ၏ မိခငျ အသကျ ၉ဝအရှယျ Margaret Wallace ကှယျလှနျခဲ့သညျ။
အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏ သမ်မတစံတျောအိမျဖွဈသောအိမျဖွူတျောသညျနိုငျငံရေးဆုံးဖွတျခကျြမြားခမြှတျရာနရော ဖွဈသကဲ့သို့ သမိုငျးဝငျ သရဲခွောကျသောစံအိမျကွီးလညျးဖွဈသညျ။ ၁၈၀၀ ပွညျ့နှဈတှငျ အိမျဖွူတျောကိုဆောကျလုပျ ပွီးစီးသညျ့ အခြိနျမှစ၍အနညျးဆုံးလူဆယျဦးကြျောမြှ အိမျဖွူတျောတှငျကှယျလှနျခဲ့ကွသညျ။ ယငျးတို့ထဲတှငျ သမ်မတနှဈဦး၊ သမ်မတကတျော သုံးဦး နှငျ့ သမ်မတတို့၏ မိသားစုဝငျမြားပါဝငျခဲ့ပသေညျ။ကှယျလှနျကွသူမြားအနကျမှ အခြို့သညျ ယနတေို့ငျ ခွောကျလှနျ့လကျြ ရှိနကွေရာ အိမျဖွူတျောဆောကျလုပျရနျ ၁၇၉၀ ပွညျ့နှဈတှငျ မွသေိမျးခံရသူ အိမျဖွူတျောမွနေရော၏ မူလမွပေိုငျရှငျ DavidBurnes လညျးတဈယောကျအပါ အဝငျဖွဈပါတော့သညျ။
Posted in Amazing, KnowledgeTagged amazing, knowledge, paranormal
Previous post ကမ္ဘာ့အအေးဆုံးရွာကလေး (သို့) အွိုင်မြခုံ
Next post ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်း ကျိန်စာများ